Sanbaloolshe "Taliyeyaasha Ciidamada haddii xilka laga qaado uma baahna magacaabis..." - Jowhar somali news leader
Home NEWS Sanbaloolshe “Taliyeyaasha Ciidamada haddii xilka laga qaado uma baahna magacaabis…”
Sanbaloolshe “Taliyeyaasha Ciidamada haddii xilka laga qaado uma baahna magacaabis…”
Agaasimihii hore ee Nabadsugida Qaranka C/llaahi Maxamed Cali Sanbaloolshe oo xalay ka qeyb galay barnaamij dood ah oo barta Clubhouse ka dhacday ayaa ka hadlay amniga doorashada iyo caqabadaha ku wareegsan.
C/llaahi Sanbaloolshe oo barnaamijkaas su’aalo lagu weydiiyay ayaa sheegay in wixii ka dambeeyay 19 February ay ka dhalatay in wax la iska weydiiyo amniga doorashada, maadaama ciidamada loo adeegsaday arrin siyaasadeed.
C/llaahi Sanbaloolshe ayaa sheegay in doorashada amnigeeda ay tahay inay sugaan Ciidamada AMISOM iyo Booliska, balse aanay aheyn Ciidanka Haramcad, Gorgor iyo Waran oo uu ku tilmaamay in arrimo siyaasadeed loo adeegsaday.
Waxaa uu is dul taagay arrinta dalabka in xilka laga qaado taliyeyaasha Ciidamada iyo doodda ka taagan cida magacaabeysa.
“Haddii taliyeyaasha ciidamada xilka laga qaado uma baahna magacaabis ee waxaa xilka sii haynaya ku xigeenada”ayuu yiri Sanbaloolshe.
Sidoo kale waxaa uu soo jeediyay in haddii suuragal tahay in Taliyeyaasha shaqo joojin lagu sameeyo ama ay caddeeyaan in aysan qeyb ka noqon doonin arrimaha siyaasadda.
Mar su’aalo laga weydiiyay weerarkii lagu qaaday Madaxweynayaashii hore iyo in marmarsiiyo looga dhigtay amniga inay halis ku yihiin ayuu ku tilmaamay inay tahay Takfiirin siyaasadeed.
Sanbaloolshe ayaa mar la weydiiyay arrinta kiiskii Qalbi dhagax, waxaana uu sheegay in qeybtii uu ku lahaa uu raalli gelin ka bixiyay, isla markaana uu qirtay, isla markaana aanu diyaar u aheyd inuu dhaho qof hebel ayaa dhiibay.
Previous articleA decade after the Syrian uprising, refugees in Jordan see no way home
Next articleShixnadii u horeysay ee Talaalka Covid-19 oo la keenay Muqdisho (Sawirro)